Maaddaama WordPress uu sii wado qabsashada suuq-geynta ganacsiga, waxaan sii wadeynaa inaan ka helno codsiyo badan oo badan ganacsiyada waaweyn ee leh goobo qurux badan oo ay qaabeeyeen sumcado cajaa'ib leh iyo shirkadaha naqshadeynta garaafka - laakiin ay ka maqan tahay wax-u-habeyn loo baahan yahay si loo saameeyo natiijooyinka raadinta dabiiciga ah. Kahor intaanan xitaa ka shaqeynin istiraatiijiyadda nuxurka macaamiisheenna, waxaan ku bilaabaynaa inaan ka caawino iyaga sidii loo hagaajin lahaa. Ma jiraan wax badan oo loo isticmaalo maalgashiga waxyaabaha aasaasiga ah haddii bartaada aan la helin!
Wednesday, September 2, 2009 Arbaco, Juun 9, 2014 Douglas Karr
Mararka aad sameysid cilmi baarista ereyga muhiimka ah markaad wax ku qoraysid wax ku saabsan mashiinka raadinta, waxaa laga yaabaa inaad ogaato in tiro badan oo ka mid ah baarayaashu ay si khaldan u higgaadiyaan ama u wadaagaan ereyo. Tusaale ahaan wuxuu noqon karaa USS Forrestal iyo USS Forestal. Ku soo bandhigida natiijooyinka raadinta erayada si khaldan loo higgaadiyay waa xeelad si fiican u shaqeysa… laakiin waxaa laga yaabaa inaadan rabin inaad si badheedh ah u si qalad ah u higaadiso ereyga cinwaankaaga boostada ama mawduucaaga. Marwalba, qof ayaa khaladka tilmaami doona
Waa maxay Permalink? Dib u raad raac Isugeynta boostada? Ping?
Khamiista, Sebtember 21, 2006 Arbacada, Oktoobar 8, 2014 Douglas Karr
Waxaan ku sugnaa qado sharaf aad u qurux badan maanta aniga iyo qaar suuqley ah oo aad u caqli badan kana kala yimid dhamaan Indianapolis. 4 ilaa 6 usbuuc kasta waxaan la kulannaa si aan uga doodno buug cusub (ama caan ah) ganacsi ama buug suuqgeyn ah. Waa fursad weyn in laga baxo xafiiska oo laga baxo faahfaahinta oo dib loogu noqdo fikirka 'sawirka weyn'. Qaar ka mid ah dadka waawayn waa daabac iyo warbaahin, kuwa kalena waa aqoon u leeyihiin internetka. Hal faallood oo aan maqlay maanta ayaa qaar wareerisay